कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: “जिउँदो लाशको मुर्दो आवाज” — जेल डायरी— ५
“जिउँदो लाशको मुर्दो आवाज” — जेल डायरी— ५
विहान सबेरै उठेर नित्यकर्म गरें । चाँडै उठेन भने चर्पि प्याक हुन्छ । ब्रश गरें । मुख धोएँ । मेरो चीनि बढेजस्तो छ । मैले औषधी नै खान पाएको थिएन । न हिंड्डुल गर्न पाएँ, न रेडियो सुत्र पाएँ न पत्रिका नै पढ्न पाएँ । कस्तो मानसिक यातनापूर्ण दिन बिताउनु परिरहेको छ । एक एक पल बिताउन मलाई गाह्रो भइरहेको छ । गाह्रो भएर के गर्ने ?
विहानको १०.३० बजेतिर एकजना सादा पोशाकको प्रहरीले मलाई लिन आयो । हतकडी नलगाइकन एक्लै बाहिर लिएर गयो । म ढोकामा पुगें । डीएसपीले मलाई भेटघाटस्थलमा लिएर गयो । त्यहाँ त नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संघर्ष समिति अध्यक्ष मण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू, मल्ल के. सुन्दर, उमेश स्थापित, पंचलाल र अरूहरू पनि आएका थिए । उहाँहरू मलाई छुडाउन आएका होलान् भन्ठानें । मेरो मन प्रफुल्लित भयो । उहाँहरूले घटनाको बारेमा सोध्नुभयो । मैले यथार्थ कुरा बताएर भनें, “यो सबै भूmठा आरोप मात्र हुन् । कुनै घटना घटेकै थिएन ।’
“हामीले एसपीसँग कुराकानी गरिसकें । यो महिला सेलको मामिला हो । यहाँबाट केही गर्न सक्दैन । म्याद थपेर ल्याइसक्यो । अब जे गर्छ अदालतबाटै फैसला हुनसक्छ ।” उहाहरूले भत्रुभयो ।
साँझ रोलकल हुँदा पनि मलाई तल चोकमा उभिन जानु परेन । कोठाभित्रै बस्न दियो । कोठामा बस्ने केटाहरूसँग मेरो हेमखेम बढ्न थाल्यो । कोठामा बसेपछि त्यहाँ भित्र बसेका केटाहरूसँग कसरी थुनामा परेको भनेर एक अर्काको दुःखका कुराहरू साटासाट हुन थाले । केही कुरा लेखुं भने कलम, कापी केही पनि राख्न दिएको छैन । जतिसुकै मिल्ने साथी भए पनि फोन नम्बर टिप्न पाएको होइन । आजदेखि मलाई पनि भित्र कोठामा सुत्न दियो । कोठाको झ्याल ठूलै रहेछ । झ्याल बन्द गरीराखेको छ । भ्यान्टिलेसन बाहेक प्रकाश र हावा आउने कुनै ठाउँ थिएन । झ्यालभरि काठको फ्लेक ठोकी राखेको छ । मनमा अनेकौं कुरा खेलाउँदै आधारातसम्म नसुतिकन बसें । ती बच्चाहरूले ममाथि त्यस्तो झुठो आरोप किन लगाएको होला ? घरमा श्रीमती हाइ ब्लड प्रेसरको रोगी । उनले कसरी मन थामी होलिन् । मेरा दाजु भाइ, इष्टमित्रहरूले के सोचे होलान् ? मेरो जिन्दगी जेलमै बित्ने हो कि ? कहिल्यै यस्तो फण्डामा नपरेको मान्छे । अरूहरूलाई प्रहरीले समात्दा म छुडाउन जान्थें । आज मलाई कसैले छुडाउन आएन । यस्तै सोच्दै कुनबेला निदाएँ थाहा नै पाइन ।